Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण काँग्रेसमा तीन गुटबाट सभापतिका आठ आकांक्षी
ट्रकले ठक्कर दिँदा साइकल यात्रीको मृत्यु
कटुवा पेस्तोल र गोलीसहित एक पक्राउ
काँग्रेसमा तीन गुटबाट सभापतिका आठ आकांक्षी
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार ०७:१९
काठमाडौँ, १३ साउन । आगामी ७ देखि १० फागुनका लागि तय भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमको गति अहिलेभन्दा बढेन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने निश्चित छ ।
कोरोना संक्रमण बढेका कारण स्थानीय अधिवेशनको पूर्वतयारीलाई थाती राखिएकामा साउनदेखि पुनः सुचारु गर्ने निर्णय कांग्रेसको पछिल्लो पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत गरिसकेको छ ।
केन्द्रीय समितिले स्थानीय तहका अधिवेशनको मिति हेरफेर गर्दै सदस्यता वितरण, पुराना सदस्यता नवीकरण र त्यसका प्रक्रिया अघि बढाएसँगै पार्टीको नेतृत्व हाँक्न आकांक्षीहरूले दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् । यतिसम्मकी हाल कांग्रेसभित्र स्थापित रहेका गुटभित्रै समेत सभापतिका लागि आकांक्षा देखाउनेहरू बढ्न थालेका छन् । जसअनुसार अहिलेसम्म कसैले पनि आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि कांग्रेसभित्रका तीन फरक फरक गुटमा आठ जना आकांक्षी देखिएका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वका लागि फेरि एक पटक वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं उम्मेदवार बन्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । यसैगरी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत आफू निकट नेताहरूमार्फत सभापतिका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिँदै आइरहेका छन् । १३औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवार बनेर कांग्रेसभित्र आफ्नो गुट स्थापित गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, हाल उपसभापति रहेका विमलेन्द्र निधि, वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंह, अर्का नेता डा. शेखर र युवा नेता गगन थापाले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाएका छन् ।
कांग्रेसको गत ११ पुसमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ७ देखि १० फागुन २०७७ मा काठमाडौंमा १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो – यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दुई न्यायाधीश नियुक्त
काठमाडौँ, ६ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । दुई जना नेकपा माओवादी केन्द्रका
रुपन्देही, ६ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौँ, ६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त भएका छन । न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज झापाका कुमार
काठमाडौँ, ६ बैशाख । सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) प्रभावित शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बालुवाटारमा